पत्रकारितामा अवसरसँगै चुनौतीको चाङ हुन्छ :- पत्रकार माधव::TINAUKHABAR
पत्रकारितामा अवसरसँगै चुनौतीको चाङ हुन्छ :- पत्रकार माधव
पाल्पाको साबिक खालिवन ८ लाम्दिखोला , मा जन्मिएर हाल तानसेन नगरपालिका, ४ बारुदखान पाल्पामा बसोबास गरेका माधब अर्याल बि.स २०५३ सालमा एसएलसी दिनुअघि पत्रकारिताका विषयमा धेरथोर जानकार थिए । किनभने उनका मामा (स्व. नारायण प्रसाद भटराई) ले धेरै पत्रपत्रिकामा रुची राख्ने र सेन माविमा पढ्ने बेलामा कक्षा १० मा पत्रकार दामोदर खनाल (सत्यकथा र अर्को एक साप्ताहिकको अनुभव) ले आफ्ना अनुभव शेयर गरेको देख्थे । जसले उनलाई पनि त्यति नै बेला पत्रकारितमा रुचि जाग्यो । २०५४ सालमा जागिरको खोजी गर्दै भौतारिएको अवस्थामा तानसेनबाट प्रकाशन हुने जगदीश भटराइको सम्पादक÷प्रकाशक रहेको जनचेतना साप्ताहिकमा सिक्ने अवसर मिल्यो ।
डेढ वर्षजनि जनचेतनाको प्रशिक्षार्थी, व्यवस्थपाक, बजार व्यवस्थापन, सम्पादन सहयोगीसम्म पुगेर सिकाई अनुभव लिए । अर्याल भन्छन् ‘त्यसपछि २०५५ साल फाुगन महिनाबाट बुटवलबाट प्रकाशन हुने दैनिक जनसंघर्षमा नियमित लेख्न थालेको हुँ । तानसेनबाट नै पत्रकारिताको सुरुवा भयो । त्यस अघि नै मैले काठमाडौबाट प्रकाशन हुने खबरकागज साप्ताहिक (जिवेन्द्र सिम्खडा, कबिर राणा, झबिन्द्र बिष्ट) मा लेख्न सुरुवात गरेको थिएँ । किनभने त्यस पत्रिकामा पाल्पाकै फेकका भुवन केसी हुनुहुन्थ्यो । वहाँले मैले लेखेर पठाएको समाचारलाई मिलाएर, सम्पादन गरेर छापिन लायक बनाइदिनुहुन्थ्यो । ’ ।
पाल्पाबाट निस्कने जनचेतना साप्ताहिकमा झण्डै डेढ वर्ष काम गरेका उनी शुरुमा सहयोगीका रुपमा प्रवेश गरेका थिए । काम सिक्दै, बुझ्दै गए । पछि सम्पादन सहयोगीका रुपमा काम गरेर छाड्ने परिस्थिति आयो । किनभने उनले बुटवलको दैनिक जनसंघर्षमा काम गर्ने अवसर पाएका थिए । ‘जनसंघर्षमा निकै लामो समय काम गरें । मेरो पत्रकारिताको करियरलाई नै अगाडी बढाउन जनसंघर्षको ठूलो योगदान छ ’ । पुराना दिन संझदै अर्याल भन्छन् ‘ त्यस पछि २०५६ र २०५७ सालमा काठमाडौबाट निस्कने खबरकागज पहिलो पटक काठमाडौबाट निस्कने पत्रिकामा काम गरेको अनुभव भयो । त्यसपछि त्यहीबाट छुट्टिएर खबरपत्रिका भन्ने पत्रिका निस्कियो । कबिर राणा, तारानाथ दाहाल लगायत हुनुहुन्थ्यो । वहाँहरुसँग पनि काम गरें ।’ जहाँ पनि कुरा पैसाकै रहेछ । पैसा नपाएपछि काम गर्ने र छाड्ने क्रम चलिरहह्यो ।
उनले असनबजार साप्ताहिक भन्नेमा पनि काम गरे । त्यसपछि पुनः कमाण्डर दैनिकमा पनि केही समय काम गरे । ‘काम गरेर के गर्नु पैसा नपाएपछि अनि काम गर्ने, छाड्ने नै भयो ।’ अर्याल थप्छन् ‘ समाजसेवा गरेर सकिँदैन भन्ने लाग्यो ।’ त्यस बिचमा नयाँ सडक दैनिक निस्कियो । त्यसमा पनि मनोरञ्जन शर्मा र उनले काम गरे । आम्दानी राम्रो थियो । दुई वर्षजति काम गरे । तर पत्रिका नै बन्द भयो । आफुले पत्रकारिताका गुरु मान्ने किशोर नेपालसँग काम गर्ने अवसर मिलेको थियो, त्यसबेलामा नयाँ सडक दैनिकको राम्रो क्रेज पनि थियो । ट्याबलोइड साइजको पत्रिकामा काम गरेर पनि राम्रो आम्दानी लिन सकेको थिए । स्टिन्जरका रुपमा काम गर्दा पनि सन्तुष्टि नै थिए किनकी यता दैनिक जनसंघर्ष पनि छाडेका थिएनन् । त्यसैले आम्दानीका हिसाबले राम्रो नै भएको अवस्था पनि थियो ।
पछि २०५९ बाट कान्तिपुर मिडिया गु्रप (कान्तिपुर दैनिक, कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर एफएम लगायत सबै प्रकाशन ) हेर्ने गरि आवद्ध भए र पत्रकारितामा स्नाकोत्तर पनि गर्न सफल भए । उनी आफूलाई धेरै समाचार लेख्नेमा दाबी गर्छन् । ‘मेरो समाचार लेख्ने रफ्तारको कुरा गर्ने हो भने मैले दैनिक जनसंघर्षमा एकै दिनमा १२ वटा समाचार प्रकाशन गरेको थिए भने कान्तिपुर दैनिकमा लागिसकेपछि एक महिनामा १ सय ५० वटासम्म समाचार प्रकाशन गरेको छु ।’ कान्तिपुर दैनिकमा झण्डै १७ महिना स्टिन्जरका रुपमा काम गरेका उनी त्यसपछि म तलबी भए । उनलाई त्यो स्टिन्जरका रुपमा काम गर्दा जत्तिको मज्जा कहिल्यै आएको छैन । समाचार प्रभाव पनि निकै परेको अवस्था त्यतिबेला नै थियो । ‘समाचार धेरै लेख्ने क्रममा मलाई शिक्षाका विषयमा रुचि बढी थियो । विभिन्न विद्यालय, त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुका विषयमा बढी लेखियो ।
’ अर्याल समाचार प्रभावको अनुभव सुनाउँछन् ‘रहवासका विद्यार्थीलाई अमेरिकामा बस्नेको छात्रवृत्ति दिलाउने काम देखि लिएर पालुङ्मैनादीका दलित बिद्यार्थीलाई बेलायतबाट छात्रवृत्ति दिने काममा मेरो समाचार नै महत्वपूर्ण थियो ।’ यति मात्र होइन, दमकडा माविका एक दलित विद्यार्थी (श्याम विक) लाई डाक्टर बनाउने अवस्थासम्म पु¥याउन उनकोे समाचार सहयोगी बनेको उनको अनुभव छ । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । कतिपयको उपचार भएको छ । कतिपयलाई सहयोग जुटेको छ । कतिपयले पढ्न पाए । यस्ता उदाहरण धेरै छन् ।
उनी सञ्चारमाध्यमभित्रका विकृति कति खोल्ने कति नखोल्ने ? भन्ने मै प्रति प्रश्न गर्छन् । श्रमजिवी पत्रकारिता ऐन लागु हुन नसक्नु पहिलो समस्या मान्ने उनी लागु गराउन नचाहानु कारण रहेको बताउँछन् । मालिक, श्रमजीवी एउटै व्यक्ति हुनु पनि समस्या छ । अति राजनीतिकरण पनि अर्को विकृति हो । पत्रकारिता अब झन् पर्चाकारिता बन्दै गएको छ । पत्रकारितालाई सुधार्न समस्यै समस्या छ । सुधार गर्न पनि गाह्रे विषय भइसकेको बताउँछन् । ‘पत्रकारितामा त्रास, अभाव र आश जस्ता विषयले प्रवेश पाइरहेको छ । जथाभावी सञ्चारमाध्यम खुल्ने र जबर्जस्ती चलाउने प्रवृत्ति विकृति नै हो ।’ उनी भन्छन् ‘ बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बनेको छ । जसले गर्दा यस्ता विकृतिलाई कमी गर्दै लग्नुपर्छ । अग्रजहरुबाट नै यस विषयमा सोच्नु पर्ने थियो ।
तर हाम्रो पत्रकारिताका अग्रजहरु नै अति राजनीतिकरणमा लाग्नु भएको छ । व्यवसायिक पत्रकारिताका विषयमा कुरा सुन्न चाहानुहुन्न ।’ जथाभावी जो सुकैको मिडियामा लगानी पनि अर्को विकृति देख्ने उनी जसले गर्दा यस्ता विषयलाई अब ख्याल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘समाजले पत्याउने पत्रकारिता हुन सकेको छैन ।’ भन्छन् ‘ किनभने तपाई हामी पत्रकार भन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनेका छौं । राजनीतिक चेतना हुनुपर्छ तर पत्रकारितामा यसरी राजनीतिकरण गर्नु राम्रो होइन । ’
जब मेरो दुवै स्तन र निप्पल निकालियो अनि मेरो शरीर अधुरो भयो…